‘देश, जनता र संगठनको सेवा गर्छु’ | Sarathi News
‘देश, जनता र संगठनको सेवा गर्छु’
September 21, 2012 | 12:01 pm
सरकारले बिहीबार कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको छ । आईजीपी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच करिब एक महिनादेखि चलेको रस्साकस्सीपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रानालाई नियुक्त गरेको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले रानालाई नै महानिरीक्षक बनाउन चाहेका थिए भने गच्छदार पहिले तेस्रो वरीयताका भीष्म प्रसाईं र पछि दोस्रो वरीयताका नवराज ढकालका पक्षमा थिए ।
६० हजारभन्दा बढी जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरीका २३ औं महानिरीक्षक भएका रानाको कार्यकाल १४ महिना हुनेछ । २०४० मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका राना व्यावसायिक छविका अधिकृतका रूपमा चिनिन्छन् । आफ्नो ब्याचको वरिष्ठतामा एक नम्बर उनका लागि संगठन प्रमुख बन्नु सजिलै चाहिँ भएन ।
५२ वर्षीय राना मानविकी संकायका स्नातक हुन् । उनले अपराध अनुसन्धान र प्रशासनिकसम्बन्धी विभिन्न उच्चस्तरीय तालिम लिएका छन् । उनन्तीस वर्ष लामो प्रहरी वृत्तिभर कुनै गैरव्यावसायिक काममा नमुछिएका उनीमाथि द्वन्द्वकालमा भएको एक घटनालाई लिएर लागेको मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतले गत महिना खारेज गरेको थियो ।
उनै रानासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी-
जनताको सुरक्षित हुने अपेक्षा कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?
जनताको शान्तिसुरक्षा नै प्रहरीको मूल कर्तव्य हो । प्रहरी सेवालाई सहज, पारदर्शी र दबाबरहित किसिमले जनस्तरमा पुर्‍याउन मैले आफ्नो नेतृत्वलाई भरपूर प्रभावकारी बनाउनेछु । नेतृत्व परिवर्तनलगत्तै हठात् परिवर्तन भन्ने हुँदैन । जिम्मेवारी बाँडफाँड, व्यावसायिकता, कार्यक्षमता, प्रहरी मनोबल, आचरणलगाय तका विष यमा स्पष्ट नतिजाहरू दिन प्रयत्न गर्नेछु ।
आईजीपी पदका लागि चरम प्रतिस्पर्धा भयो । यस्तो अवस्थामा ‘टिम स्पिरिट’ कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
म ‘पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट’मा विश्वास राख्छु, यही मेरो कार्यशैली हो । जहाँसम्म प्रतिस्पर्धाको कुरा छ, त्यो स्वभाविक र व्यावसायिक ढंगबाट भयो । संगठनभित्रको एउटै मात्र स्थानका लागि एकभन्दा बढी दाबेदार हुनु अनौठो होइन । हामी एक ढिक्का भए र काम गर्छौं । त्यो वाता वरण बनाउने जिम्मेवारी मेरो हो ।
तपाईंलाई यो पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक गुन लागेको हो ?
मलाई पटक्कै त्यस्तो लाग्दैन । बाहिरबाट त्यस्तो ‘प्रोजेक्सन’ भएको हुनसक्छ । म कर्तव्यनिष्ठ र गैरराजनीतिक पहिचा न भएको राष्ट्रसेवक हुँ । म यो कुरा व्यवहारमै पनि देखाउनेछु ।
गृहमन्त्रीसँगको सहकार्य कस्तो रहने अपेक्षा छ ?
म राज्यको एउटा सिपाही हुँ । मलाई राज्यको नीति, कानुनले बाँधेको छ । त्यहीअनुसार देश, जनता र संगठनको सेवा गर्छु । मलाई मेरो जिम्मेवारीमा द्विविधा छैन । म यसबारे स्पष्ट छु ।
तपाईंबाट जनताले तत्काल के आस गर्ने ?
गुनासो सुन्ने, इच्छित सेवा दिने प्रहरी संगठन मेरो सर्वोपरि लक्ष्य हो । यसका लागि म आफ्नो कार्ययोजना शीघ्र सार्वजनिक गर्नेछु ।